The Somali Dir Clan's History: Codka Beesha Direed: 05/26/12
Posted by DIRSAME at 11:39 PM No comments:
Posted by DIRSAME at 11:26 PM No comments:
Waxaa jiray boqor Soomaaliyeed oo caan ahaa oo ka talin jiray degaanka Jigjiga caasimadda u tahay. Waxaa boqorkaa la odhan jiray Garaad Wiilwaal wuxuuna ahaa nin aragti soofaysan, aftahanimo, iyo hogaamin aad u heersarraysa Alle weyne ku manaysatay. Wuxuu dagaal galaa-bixin jiray niman Galla ah oo uu dhul badan ka furtay. Wuxuu ahaa nin weedhiisu ka socoto degaanka u dhexeeya Herar iyo Jigjiga iyo dhulalka dariska la ah. Colaad iyo nabadgelyaba wuxuu ahaa hormuud Soomaaliyi ku dhaarato gabyaa culusna ah. Saldano taam ah iyo tol aad u tanaaday oo xoog badan markii uu isku hubsaday ayuu is cajabiyey oo wuxuu isku qanciyey inaan Bartire nin la aragti ah ama kusoo dhaw ku jirin.
Sidoo kale waxaa jiray wiil dhalin yar oo qeyrada Garaadku ka dhashay ahaa Illaahayna dadka wax walba uma siminee ku manaystay bidhaan, hadal macaan, aftahanimo, iyo garasho heersare ah. Cali ayuu ahaa magaciisu. Wuxuu Cali caashaqay haweenay ka mid ahayd haweenkii Garaadka oo uu wacad ku maray inuu wax walba oo aan dhiig-sokeeye ahayn oo ay ku qaadataba mar guri haweenaydaasi xaas ka tahay yagleelo. In muddo ah wuxuu ku taamo siddii dabin mar haweenaydaa uu kula kulmo uu qooli lahaaba, habeenkii dambe ayuu ku guulaystay inuu la kaliyeysto oo haasaawe aan kala go’ lahayn iyo ‘hadal beenta ka fiican runna raad ku lahayn’ la qaadaa-dhigay.
Mar saddexaad, waxaa jirtay xaaska Garaadka ee Cali jeclaaday oo ahayd haweenay aragti fog Garaad Wiilwaalna u ahayd dhidib adag, mar walba halkii uu goldaloolo ka yeelan karaba u tilmaanta, xasarad walbana u marta siddii saygeedu ugu nagaan lahaa saldanada Bartire islaweyni iyo qab ragna uusan sabab u noqonin burburka boqortooyadan balaadhan. Waxaa u muuqatay muhiimadda ay boqortooyadu u leedahay tolkeed oo colaad af-dhiige ah hareeraysay iyo in hogaamiye sida odaygeeda adag aysan ka maarmin. Sida aad sheekadaba ka dheegan doonto, waxay ahayd gabadh aan ragga waxba u ogayn dhinac walba oo aad ka eegto kuna habboonayd inay Garaad Wiil Waal u dhaxdo.
Inkasta oo ay garashada qofka Soomaaliyeed ku adagtahay in shaqsi kale udub dhexaad u noqdo sheeko Garaadka magaciisu ka dhex yeedhay, haddana waxaa xaqiiqo ah inay lama huraan tahay in Cali lagu hormaro si qodbaqaadka sheekadu u hagaago.
Jilibka ayuuu xodxodasho u aastay. Wax la haasaawaba goortii in la kala hoydo loo hogbaday ayey waxay dacal go’ii uu hullaabnaa ka mid ah marisay asal si ammaarad barri loogu garto ay u noqoto. Ha la yaaabin in Cali go watay maxaa yeelay waqtigaas ragga Soomaaliyeed sidaa ayey u labisan jireen. Waxay ahayd intaan macawisaha, saraawiisha iyo dhamaan dharka tolan geyiga Soomaaliyeed soo gaadhin. Cali isaga oo aan wali dhooroofin sirta ay haweenaydu la damacsan tahay, damaciisiina aan waxba uga hirgalin ayuu cadho la luuday. Wuxuuse naftiisa ku samirsiiyey inuu soo noqon doono isna oggolaysiin doono haweenayda.
Waagii haddii uu baryey ayaa Garaadkii reerkiisii soo bariidiyey isagoo waliba hinfidh ka muuqdo; naa maxaa la sheegay? Nabad iyo naxariis. Oo xalay oo dhan aqalka daahu wuu u dheeraaye see wax u jiraan? Waxba ma jiraanee, adigu saw ima aaminsanid aniga, ayey wediisay. Wanaag iyo intii dumar lagu raaco oo dhan ayuu ku yaqaanay, wax uu u aamini waayana hadda ka hor kuma arag sidaa daraadeed waxaa u banaanaa oo kaliya inuu yidhaahdo haa oo waan ku aaminsanahay. Sidaa unbuuna yidhi.
Haddaba haddaad i aaminsan tahay xalay oo dhan ninkii isagaa ahaa ayaa guriga joogay oo aanu sheekaysanaynay wax aan sheeko ahaynna nama dhax marin ayey u celisay. Markaad maanta geedka tagtaan waxaad ku garan doontaa sifo uusan xariifnimo kale oo uu ku badalo heli karin. Oo maxay tahay ayuu Garaadkii weydiiyey. Waxaad arki doontaa ileen waa nin xalay oo dhan soo jeedayee isagoo madaxa hoogaaminaya oo lulmoonaya. Waayahay bal aniga iyo isaga ha laysku eego maanta, ayuu yidhi.
Geedkii ayaa raggii isagu yimid. Cabbaar haddii uu fiirfiiriyey waxay markiiba ishiisu qabatay barbaar gooni ragga uga fadhiya oo aad moodo inuu xadraynayo. Waa sidee saaxiib, maxaad ugu lulmoonaysaa shirka dhexdiisa? Miyaadan xalay seexan? ayuu Garaadkii weydiiyey. Talo faro ka haaday, ma is tidhi? Maya, kama haadin ee Cali nin garashadiisu gaashaan qaad tahay ayuu ahaaye markiiba wuxuu gartay ujeedada hoose ee su’aasha Wiil Waal, si degani iyo kalsooniyi ku jirtana ugu jawaabay “maya Garaad ma lulmoonayo ee waan hammiyey.” Oo maxaad ku hammiday ayuu si cadho ku jirto u weydiiyey? “Waxaan ku hammiyey; lugo goroyo ma horaa, mise waa dib” ayuu si dhiiran Cali ugu jawaabay.
Garaadkii oo markiiba fahmay in ninku ninkii xariifka ahaa ee haweenaydiisa shukaansaday yahay ayaa qosol la dhacay. Waxaad tahay damac-badanihii isaga ahaa ee aan dhawrka jeer ku guuldaraystay inaan helo; saw ma aha adiga ninka xaaskayga hunguriyeeyey? ayuu Wiil Waal si cod dheer u yidhi. Guurtidii geedka fadhiday ayaa mar qudha dhinaca Cali wada eegtay iyagoo mindhaa u naxsan, aayo xumada uu la kulmi doonana ka welwelsan. Waxay islahaayeen koley yarku ciqaab mudaye, ciqaabtaasi ma dil qudh-gooye ahbaa mise waa dakhar in badan uu la dhul jiifi doono! Waxaa laabtooda ka guuxday su’aasha ah tolow inta ficil xumo badatay see Garaad Wiil Waal reerkiisa Cali u hawaystay!
Cali isagoo raba inuu jawaabo oo is xujo bixiyo ayaa intuusan wali hadlin Garaadkii hadalkii mar kale qaatay oo soo jeediyey dhammaan guurtidii geedka fadhiday isagoo leh: “Bartirow i maqal, haddii tii Rabbi ii timaado waxaad hoggaamiye ka dhigataan oo aad doorataan wiilkaa yar, maxaa yeelay waa nin garasho culus oo aan iga dhicin dabagalkiisana aydaan ku khasaaraynin.”
Intaasi hadday Garaadka afkiisa kasoo baxday, qosol gariir male beenoobay uu sababay ayaa wajiyada guurtidii geedka fadhiday ka muuqday, waxayna mar kale si hambalyeyn u eg u wada eegeen dhinacii Cali geedka ka fadhiyey madaxana u yara gundhiyeen. Calina shaw is yar atooree oo inuu mansab hor leh oo uusan Bartire ku dhex lahayn ku yeelan doono niyadiisa u sheeg.
Halkaa ayey Cali iyo Garaad Wiil Waal isku barteen, raadintii iyo rabitaankii Calina ku ibo beelay, haweenaydiina ku badbaadisay colaad iyo ciil sokeeya iyadoo naf ahaanteeduna ceeb-ka-saliim ah.
Posted by DIRSAME at 10:53 PM No comments:
Ethiopian Islamic Heritage - The 4th Islamic Exhibition in Addis Ababa
Bilal Show - (Must Watch) The First Modern Quran Tahfiz Center in Addis Abeba
Posted by DIRSAME at 3:46 AM No comments: